ကောင်းကင်ဖြူ: June 2012
ဒီ … တစ်ခါ …. ဖြင့်
ငါ့ သား .... ရယ် ….. ။
ထို မှ စ၍
စီးကာ ကြွ လျှက်
မျှော်ရ ရှာသည် … ။
တစ်နေ့ချိန်ဝယ်
မိုး ခြိမ့်ခြိမ့် ဆင်
ရေ ဖွေးဖွေး လွင်
ဝန်းကျင် အုံ့ စိုင်း
ရှေ့ လမ်း ဆီက
ခြေ ဗလာ ဖြင့်
အိမ်သို့ ပြန်သည် … ။
သားငယ် ….. ရယ် …. ။
စိုရွဲ မိုး ရည်
သားငယ် ရှေ့ ဆီ
အိတ်ငယ် ဖွင့်၍ …………….
ရော့ …. ငါ့ ….. သားဖိနပ် …. အဖေ ချောင်းထဲမှာ မျောနေတာ တွေ့ လို့ 
ရေကူးပြီး ဆယ်လာတာ …. ။
….. သြော် …. အဖေ …. ရယ် ……… ။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။
ဘာရယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး ..... ။ ဒီနေ့အဖေများနေ့ မှာ အဖေ့ကို သတိရရင်း ငယ်စဉ်က မေ့မရတဲ့ အဖေနဲ့ကျနော် ကြားက အဖြစ်လေးကို သတိရလို့ချရေးမိတာပါ …. ။
အဖေ ကျန်းမာပါစေလို့သား ဆုတောင်းပါတယ် ….. ။
Posted by မောင်ဘုန်း at 11:36 AM9comments
တစ်ဘဝ ..... ပါ
မျှော်ရင်း သာ လွမ်း ၊ လွမ်းရင်း သာ မျှော်
ဖြစ်သည့် ဘဝ ၊ မလွန် ရှာ လေ
မယ် က တပြည် ၊ မောင် တပြည် မို့ 
ယုယ ကင်းလျှက် ၊ ပူပန် ထပ် ကာ
ရစ်ရစ် အလွမ်း ၊ ထပ်ထပ် ခြုံ လျှက်
ကုန်ရ ည ပေါင်း ၊ များရ ရှာပြီ
တစ်ည တစ်ရက် ၊ ဆုံးစေ များလည်း
ရင်ဆန့်လေမျှ ၊ အလွမ်း စုကာ
စုံမက် ဆပွား ၊ ချစ်ရ ရှာ သည်
ကမ္ဘာခြား စေ ၊ ရေမြေ ဆုံး စေ
တောတောင် ခြားလည်း ၊ နှစ်ဦး ထပ်တူ
ရှိသည့် ချစ်များ ၊ သက်ထက် စု ၍
နာရီ တရွေ့၊ လျှက်တပြတ် တိုင်း
ထပ်တူ မြဲ ရင်း ၊ သစ္စာ အပုံ
ထပ်ကာ ဆင့်လျှင် ၊ မြင့်မိုရ် မက
သာလွန် လျှက်မို့၊ အပ်နှင်း ထပ်ထပ်
နှစ်ယောက် ဆိုလည်း ၊ တစ် ဘဝ ပါ ….. ။
Posted by မောင်ဘုန်း at 9:12 AM 8 comments
Labels: ချစ်သူအတွက် အမှတ်တရ
ဓာတ်တိုင်အောက်က new post
သြော် ….. နာရမည် ၊ အိုရမည် ၊ သေရမည် ….. လို့ဆရာတော်ဘုရားဟော စဉ်က ဘာမှ မခံစားရသလိုပဲ ။ အင်း ….. အခု လပိုင်း ကျန်းမာရေး နည်းနည်း ညံ့ လာတော့မှ တွေးကြည့်လေ ကြောက်မိလေပဲ … အင်းလေ .. သဘာဝပေပဲ ဘာ မတက်နိုင် မှာလဲ ….. ။
ကျနော် နှင့် ဆရာဝန်
နှစ်လ လောက်ရှိပါပြီ ။ ဘယ်လို က ဘယ်လို စတယ်မသိ ကျနော် မကြာခဏ ဆိုသလို နေမကောင်းဖြစ်တယ် ။ ကြီးကြီမားမား ရောဂါတော့ မဟုတ်ပါဘူး ။ အအေးမိ ဖျားတာ ၂ လအတွင်း သုံးကြိမ်ကြိမ် တိတိရှိပါပြီ ။
ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က နောက်ဆုံးအကြိမ်ပေါ့ … ။ ရိုးရိုးဖျားရာ ကနေ ရင်ဘက်အောင့် လာပါရော ဗျာ ။ နည်းနည်းလေး အေးရင် ကို အောင့်တာ ပါ ။ အောင့်တဲ့ နေရာက နံရိုး ကနေ အောင့်နေတာ ။ ကျနော် အထင်တော့ ဒဏ်ရာဟောင်းက ပြန်နာ တယ်လို့ထင်မိပါတယ် ။
ဒီလိုပါ လွန်ခဲ့ ၂ နှစ်လောက်က ကျနော် ကားကြီးတွေ ဆေးမှုတ်တဲ့ အလုပ်လုပ်ပါတယ် ။ တစ်နေ့အလုပ်လုပ်နေရင် ဆယ်ဘီကား ခေါင်မိုးပေါ်ကနေ ပြုတ်ကျ ခဲ့ဖူးပါတယ် အဲ့မှာ ကျနော် ဘယ်ဘက် နံရိုး တစ်ချောင်း ကျိုးခဲ့ ပါတယ် ။ ကလန်း ဆေးရုံ မှာ တစ်ပတ်လောက် နေခဲ့ရပြီ ကျိုးနေတဲ့ နံရိုး ကို ပြန်ဆက်ခဲ့ပါတယ် ။ တစ်လလောက်ရှိမယ် ထင်ပါတယ် ကျနော် အလုပ် မဆင်နိုင်ခဲ့ဘူး ။ နောက်တော့ အဲ့ ဒဏ်ရာက ကျနော် အတွက် မေ့တောင် မေ့နေပါပြီ ဘာနာကျင်မှု့မှ မရှိပါဘူး ။
အခုအချိန်မှ နာလာတော့ ပြန်များကျိုး သွားပြီလား ထင်မိတာပါ ။ ဒါပင်မဲ့ ဘာနဲ့မှလည်း ထိခိုက်မှု့မရှိခဲ့ပါဘူး ။ ခက်တာက နာတဲ့ နေရာက ဒဏ်ရာဟောင်နေရာတည့်တည့် ဖြစ်နေတယ်လေ ။
ဒါနဲ့ဆေးခန်း သွားပြီး ဆရာဝန်ကို ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင် ပြောပြ တော့ ဆရာဝန်က သေချာစမ်းပါတယ် ဟိုနားကိုင်လိုက် ဒီနာကိုင်လိုက်နဲ့နာလားလို့မေးပါတယ် ။ မနာလို့မနာဘူးလို့ပြန်ပြောလိုက်တော့
ဓာတ်မှန် ရိုက်မယ်တဲ့ … ။ ရိုက်ရမယ် ဆိုလဲ ရိုက်ပေါ့ …. ဒါနဲ့အဲ့ ဆေးခန်း မှာပဲ နာရီဝက်လောက် အကြာ ဓာတ်မှန် ရိုက်ပြီး ဆရာဝန် နဲ့ဒုတိယ အကြိမ် ထပ်တွေ့ပါတယ် ။
ဆရာဝန် ……….. ရင်ဘက်က တစ်ကယ်ရော နာနေတာလား။ ပွင့်ပွင့် လင်းလင်းပြောပါ မင်း MC လိုချင်လို့ လား .... ။
မောင်ဘုန်း …… ဗျာ …. ။ မဟုတ်ဘူး ဆရာ … ။ ကျနော် တစ်ကယ် နာနေတာပါ နှစ်ရက်ရှိပါပြီ … ။
ဆရာဝန် …..…. ဆရာလည်း သေချာဆန်းတာပဲ မသေချာမှာဆိုးလို့ဓာတ်မှန် ရိုက်ကြည့်တာ ဘာမှမတွေ့ပါဘူး ။ အရင် ကျိုးထားတဲ့ ဒဏ်ရာဟောင်းကလဲ အသားသေ နေပြီ ဘာမှ ထူးထူးခြားခြားမတွေ့ဘူး .. ။
မောင်ဘုန်း …. ဗျာ … ဒါဆို ဘာလို့နာတာလဲ ဆရာ …. ။
ဆရာဝန် ….. ဆရာလည်း သေချာ ပြောလို့ မရဘူး ။ တစ်ကယ် နာနေရင်တော့ ဆေးရုံ သွားပြီး ဆေးစစ်ကြည့်တာ အကောင်းဆုံးပဲ ။
မောင်ဘုန်း ….. ဟုတ်ကဲ့
ဆရာဝန် ….. တစ်ခုလောက် အကြံပြုချင်တယ်ဗျာ …. ။
မောင်ဘုန်း …. ဟုတ်ကဲ့ ….ပြောပါ ... ။
ဆရာဝန် …….... ဒီဒဏ်ရာ ဟောင်းကို စိတ်ထဲ ထည့်မထားနဲ့ဗျာ .. ။ ခဗျား … ဒီ ဒဏ်ရာဟောင်းကို စိတ်ထဲ စွဲနေတယ်လို့ကျနော် ယူဆတယ် လေ ။ အခု ဓာတ်မှန်လည်း ရိုက်ကြည့် ပြီးပါပြီ ။ ဒီ ဒဏ်ရာ ဟောင်းက ဘာမှ မဖြစ်ဘူးဆိုတာ သေချာပါတယ် ကျနော် အာမခံပါတယ် ။ စိတ်ထဲမှာ ဒီ ဒဏ်ရာကို အစွဲ မထားနဲ့ဗျာ … ....... အခု ခဗျားအအေးမိလို့ဖျားနေတယ် … ။ ကိုယ်ပူ ချိန်လဲ နည်းနည်း များတယ် အဲ့ဒါကိုပဲ ဂရုစိုက်ပါ ကျနော် MC ၄ ရက် ရေးပေးလိုက်မယ် … ။
ကျနော် ဆရာဝန် ကို ဘာမှ ပြန်မပြောဖြစ်ခဲ့ပါဘူး ။ ပေးလိုက်တဲ့ ဆေးတွေ ယူပြီ ပြန်လာခဲ့ပါတယ် ။ ဆရာဝန်ပြောလိုက်တဲ့ စကားတွေ ကိုပဲ ပြန်စဉ်စားနေမိတယ် ။ ကျနော် ပဲ ဘာသာပြန်တာ လွဲသလာပေါ့ ။ သေချာတွေးကြည့်လေ ကျနော် ကိုယ် ကျနော် သံတယ ဖြစ်လာတယ် ။
ကျနော် က ဘာမှမရှိတဲ့ ဝေဒနာကို စိတ်က နာတယ်လို့ထင်နေတာလားလို့ကိုယ့်ကို မေးကြည့်တယ် ။ တွေးလေ တွေးလေ …. ဘုရားရေ …. ဆရာဝန်က ကျနော် ကို စိတ်ရောဂါ ဖြစ်နေပြီ လို့ပြောလိုက်တာများလားလို့တွေးမိ ရင်း ဖျားနေတာတောင် ဘယ်ရောက်သွားမှန် မသိ ပါ ။
ညရောက်တဲ့ ထိအတွေးက ဆရာဝန်ပြောလိုက်တဲ့ စကားကိုပဲ ကြားနေမိတယ် … ။ ဒါနဲ့ကောင်းကင်ဖြူ ဆီ ဖုန်းခေါ်ပြီး ဘာလုပ်သင့်လဲ လို့တိုင်ပင်ကြည့်တော့ ကောင်းကင်ဖြူက စိတ်ထဲ မထည့်ရမှာက ဆရာဝန် ပြောလိုက်တဲ့ စကားပါတဲ့ မသက်သာရင် ဆေးရုံးသွားပြီး ဆေးစစ်ကြည့်ပါတဲ့ ။ အဲ့နေ့ ညက ကောင်းကင်ဖြူ ပြောတဲ့စကားတွေ ကြောင့်သာ စိတ်သက်သာ ခဲ့ပါတယ် ။ မနက်မိုးလင်းတော့ ဖျားတာလဲပျောက် ၊ ရင်ဘက်က နာတာလဲ ပျောက် လုံးဝ အရှင်းပဲ …။ တစ်ရက်လောက် စောင့်ကြည့်တယ် ...ရင်ဘက်က ဘာမှ နာကျင်မှု့မရှိတော့ဘူး ။ အခု အလုပ်ပြန်ဆင်းနေပြီ ဘာမှကို မဖြစ်တော့ဘူး လေ ။ ကျနော် ပဲ စိတ်စွဲ သလား ဆရာဝန် ပဲ ယူဆချက်မှားလားတော့ အခုထိ ခွဲခြားလို့ မရပါဘူး ။
ကျနော် နှင့် တရုတ်ကား
ဒီနေ့ တော့ စာရေးချင်တာနဲ့စိတ်ထဲရှိတာတွေ ရေးနေမိပါတယ် ။ အခု ကျနော် အလုပ်အကြောင်းလေး နည်းနည်းလောက် ပြောပြချင်ပါတယ် ။ အခု ရက်ပိုင်မှာ အရင်လုပ်နေတဲ့ ကားတွေ လက်စသက်ပါပြီ အားလုံးပြီးပါပြီ ။
ဒါကတော့ လက်ကျန်ကားတွေပါ လာမယူကြသေးဘူးလေ
ဒါကတော့ ပျက်နေတဲ့ကားတွေပါ ဘယ်လိုမှ လက်ပူတိုက်မရပါ ဒီကားတွေ ကို ထုတ်လိုက်တဲ့ စက်ရုံက ကျွမ်းကျင်တဲ့ သူတွေ လာလုပ်မယ်လို့ပြောတာပဲ
ဒါကတော့ ကျနော် မောင်ဘုန်း ရဲ့ လက်ရာ ပါ ဒိုက်ခွက် ထဲမီးမလာလို့ကလိရင်း အဲ့လိုဖြစ်သွားတာပဲ ပြန်တက်ဆိုရင်တောင် ဘယ်လို လုပ်ရမှန်မသိပါဘူး အဲ့လို တော်တာလေ .. ။
ဒီမှာ တစ်စီး ကားအသစ်ပါ ... ။ အင်းဂျင် စစ်ရင်း Power pump ပျက်သွားတယ် ... တရုတ်ကားအဲ့လို ကောင်းတာ .... ။
ကားတွေ အားလုံးလုပ်ပြီးတော့ မောင်ဘုန်း ပြန်ရတော့မယ်ဆိုပြီ ပျော်နေမိတာ ။ ရှိသေးတယ်တဲ့ နောက်ထပ် တရုတ်ကား အသစ် တွေ လာနေပြီတဲ့ ... ။
ဒီတခါလုပ်ရတဲ့ ကားအကြောင်းတော့ သေချာမသိရသေးပါဘူး တစ်စီးမှ ကို မဆင်ရသေးတာပါ အခုမှ လူခွဲ ပြီး ကိုယ်လုပ်ရမဲ့ အပိုင်းကိုလေ့လာနေကြဆဲပါ ... ။ ကားနာမည်က JAC တဲ့ လုပ်ငန်းသုံး အမျိုး စားဖြစ်ပါတယ် ။
simple ကားပါ ... ရှေ့ ကနေ သေချာရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ ဘယ်ရောက်မှန် မသိလို့ရှိတာလေးပဲ တင်လိုက်တာပါ နောက်မှ သေချာ ရိုက်ခဲ့ပါမယ် ... ။
ပုံက သိမ့်မကြည်ဘူး... ရှာကြည့်တာ ဒီပုံလေး ထွက်လာလို့ပါ ... ။
အရင်ဆုံး အခုလိုပြန် ဖြုတ်ပြီး ကိုယ်နဲ့ ဆိုင်ရာ အပိုင်လိုက် ကားတပ်ဆင်ပုံ လေ့လာကြပါတယ် ။
ဒီကားရဲ့ အင်ဂျင်ပါ .... ။
ဒီကားတွေ အ ကြောင်းလောလောဆယ် သိသလာက်တော့ တော့ ဒီကားတွေ ကို ZHEJIANG AMP INCORPORATION ကထုတ်လုပ်တာ ဖြစ်ပြီ တရုတ်ကားဈေး ကွက်မှာ တော့ အရည်သွေး ကောင်းနာမည် ရ အမှတ် တံဆိပ် ရှိပါတယ် .... ။ နောက်မှ ပဲ လုပ်ရင်းနဲ့အားနည်းချက် အားသာချက်တွေ ရေးပါမယ် ။
နောက်ဆုံးပြောချင်တာတော့ ကျနော် အခုရေးတဲ့ post လေးရဲ့ ခေါင်းစဉ် အကြောင်းပါ .. ။ ဓာတ်တိုင်အောက်က new post လို့နာမည်ပေးလိုက်တာကတော့ ဒီနေ့စာရေးချင်တာနဲ့လူရှင်းတဲ့ ဒီနေရာလေးမှာ အခုလို စိတ်ထဲ ရှိတာတွေ ချရေးနေမိလို့ ပါ .... ကြည့်ပါအုံး ...
အခုရောက်နေတာက ကိုယ့်အိမ်မဟုတ်ဘူးလေ နေရတာ လူအရမ်းများတယ် ဘယ်လိုမှ အခန်းထဲမှာ သုံးလို့အဆင်မပြေလို့ဒီနေရာလေးလာခဲ့တာပါ ... ။ အခုတလော ကျနော်လိုင်းလည်းသိမ့်မသုံးဖြစ်ပါဘူး
ကျနော် မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေ အိမ်ကို မရောက်ဖြစ်တဲ့ တွက် တောင်းပန်ပါတယ် ဗျာ ... ။
အခုလို ဘာတွေမှန် မသိ ရေးထားတာကို ဆုံးအောင်ဖတ်ပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါ ... ။ မင်္ဂလာ ညချမ်းလေး ဖြစ်ပါစေ ..... ။ ကျနော် ကတော့ ပြန်တော့မယ် ခြင်ကိုက်တယ်လေ ... ။
Posted by မောင်ဘုန်း at 7:17 AM7comments
လ နယုန် ဝေယံမှာ
မှိုင်းပြာပြာ တိမ်ပန်း တွေက
ငွေခြည်ရောင် သွန်းကာရစ် လို့ 
လှရှာ တဲ့ နတ်ပန်းချီ ရယ် ….. ။
မြေယံဝယ် ကြည့်ပြန် တော့
စိမ်းနုအခင်း မြက်သားမွေး နှင့်
ပန်းစံပယ် လန်းတဲ့ ရာသီ
ဘယ်မမှီ ထူးလှ ပြန်တယ် …. ။
သည်အခါ ထွန်း လေမှ
လ နယုန် ဆန်းလငယ် နှင့်
ယှဉ်ကာပြိုင် ထွန်း လေတဲ့
မြတ် မဟာ မွေးနေ့ မင်္ဂလာ ……။
ယနေ့ ကျရောက်သော ကိုလွင်ပြင် ရဲ့ မွေးနေ့ မင်္ဂလာမှ သည် နောင်နှစ်များစွာတိုင်ထိ ချစ်ဇနီး နှင့် မတ္တာ ဆင့်ကဲ ထပ်တူ ချစ်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ် ... ။
Posted by မောင်ဘုန်း at 8:43 AM 8 comments